Tababaraha Juventus Massimiliano Allegri: “Gonzalo Higuain waa ka fiican yahay Harry Kane” - Jazeera FM
Tababaraha Juventus Massimiliano Allegri: “Gonzalo Higuain waa ka fiican yahay Harry Kane”
Tababaraha kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa shaaca ka qaaday inuusan ku biirin doonin weeraryahanka kooxda Gonzalo Higuain ee Tottenham Hotspur’s Harry Kane, hadii loo ogolaado labada xul.
Isagoo ka hadlayay ka hor kulanka Juve ee Champions League ee ay la ciyaarayaan Spurs, Tababaraha reer Talyaani ayaa qirtay in Kane uu yahay weeraryahan sarre “laakiin wuxuu sheegay inuu ku qasbi la’yahay inuu ku soo laabto line-upkiisii ugu horeeyay ee Old Lady markii uu joogay Higuain.
“Marka la fiiriyo doorka u dhaxeeya Higuain iyo Kane, weli waan qaadan lahaa Pipita madaama aan ahay sagaal nambarkeyga, xitaa haddii Kane uu yahay weeraryahan heer sarre ah,” ayuu u sheegay suxufiyiinta intii lagu gudajiray shir jaraa’id ka hor.
Higuain ayaa hogaamin doona weerarka Juve marka loo eego weeraryahanka kaliya marka Spurs ay soo booqato Allianz Stadium lugta koowaad ee tartanka, madaama ciyaaryahanka reer Brazil Paulo Dybala uu maqnaan doono dhaawac muruqa ah.
Kane ayaa kulankaan ku soo bilaaban doona sideed gool todobadii kulan ee ugu dambeysay, halka Higuain uu dhaliyay lix gool afar kulan.
The post Tababaraha Juventus Massimiliano Allegri: “Gonzalo Higuain waa ka fiican yahay Harry Kane” appeared first on Wararka Ciyaaraha.
← Arsenal oo xiiseyneysa xiddiga garabka uga ciyaara Benfica Andrija Zivkovic?
Smalling iyo Jones oo bedelkoda laso helay →